ကျွန်တော်တို့ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ရလောက်အောင် လွဲနေတဲ့ နာမည်များ - CantWait2Say
သင်္ကြန် အားလပ်ရက် မှာ ဘယ်ပြည်တွင်း ခရီးစဉ်တွေ သွားသင့်လဲ ??
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဓာတ်ဖမ်းလို့ အကောင်းဆုံး နေရာ ၁၀ခု အကြောင်း
ဒီနှစ် သင်္ကြန် ဘယ်မဏ္ဍပ် ထိုင်ရင်ကောင်းမလဲ ??
လေယာဉ်ပျက်ကျ သေဆုံးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှူးရဲ့ ဈာပန
ကျွန်တော်တို့ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ရလောက်အောင် လွဲနေတဲ့ နာမည်များ
General knowledge February 12, 2018
အသီးပုံစံဖြစ်နေတဲ့ အရွက်တစ်မျိုး သားပိုက်ကောင်ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ ဝက်ဝံ ခူကောင်ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ တီကောင် ခင်ဗျား ဘာတွေပြောနေတာလဲ။
နာမည်ပေးမှားတယ်ဆိုတာအတွက် misnomers ဆိုတဲ့ သီးသန့် term တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ရှာဖွေကြမယ့်ဟာပါ။
၁။ ဘယ်ကဘယ်လို ကျွန်တော် Bald (ဂတုံး)ဖြစ်ရတာလဲ
bald eagle (သိမ်းငှက်ဂတုံး) ဟာ ဂတုံးမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ခေါင်းမှာ အမွေးဖြူတွေရှိပါတယ်။ မြောက်အမေရိက က တစ်ခုတည်းသော
သိမ်းငှက်ပါ။ သူ့ရဲ့တောင်ပံအရှည်ဟာ ၇ ပေအထက်ရှိပြီး သူ့ရဲ့အဓိက စားစရာကတော့ ငါးပါ။
၂။ ကျွန်တော်က ခင်ဗျားအိမ်နောက်ဖေးကို တကယ်ကို မြန်မြန်တူးပေးနိုင်ပါတယ်
ပရေရီခွေးဆိုတာ ခွေးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြောက်အမေရိကမှာ တွေ့ရတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကိုက်ဖြတ်တတ်တဲ့ သတ္တဝါတစ်မျိုးပါပဲ။ သူတို့ဟာ
အလုပ်ကြိုးစားကြပြီး မိသားစုကို ဦးစားပေးတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ မြေကျင်းတွေ ဥမင်အနက်ကြီးတွေတူးပြီး အုပ်စုဖွဲ့နေကြပါတယ်။
၃။ Turkey Saga
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာက တူရကီတွေဟာ အရှေ့အာဖရိက ကနေ ဥရောပကို ရွှေရောင်ငှက်တွေ တင်ပို့ပါတယ်။ ဥရောပသားတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ
အိမ်စားကြက်တွေဟာ တူရကီကလာတာပါ။ ဒီတော့ တူရကီကြက် သို့ အတိုအားဖြင့် Turkey(ကြက်ဆင်) ဆိုပီး ခေါ်ကြပါတယ်။
ဥရောမရှာဖွေစွန့်စားသူတွေဟာ မြောက်အမေရိကကို ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့သိတဲ့ Turkey နဲ့ဆင်တူတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်ကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ အဲငှက်ကို အဲနာမည်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ အဲဒါပါပဲဗျာ။
sweetbread(ပေါင်မုန့်ချို) ဆိုတာ ချိုလဲမချိုသလို ပေါင်မုန့်နဲ့လည်း ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ အဲဒါဟာ စားစရာအတွက်အသုံးပြုတဲ့ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရဲ့
thymus gland ပါ။
၅။ ဘယ်ဘာသာစကားနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ရေပူချိုးတာဟာ ပြီးပြည့်စုံမှုတစ်ခုပါပဲ
တူရကီရေချိုးခြင်းရဲ့ မူလအစဟာ တူရကီကမဟုတ်ပါဘူး။ ရောမကစတာပါ။ သူတို့ကို thermae လို့ခေါ်စဉ်အချိန် Hellenic-Roman ခေတ်မှာ
၆။ ဒါလာတာနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မမြင်ပါဘူး
သခွားသီးဆိုတာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာ အပင်ရဲ့ပန်းပွင့်အစိတ်အပိုင်းကနေ လာတာပါ။ သူ့မှာ အစေ့တွေရှိတဲ့အတွက် ရုက္ခဗေဒနည်းအရ
Guinea pig (ရွှေဝက်) ဆိုတာ ရွှေကနေဖြစ်လာတာမဟုတ်သလို ဝက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သူက ကိုက်ဖြတ်တတ်တဲ့သတ္တဝါတစ်ကောင်ပါ။ လေ့လာမှုတွေအရ
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ လောက်က ရွှေဝက်ကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် စတင်မွေးခဲ့တာပါ။
Silkworm (ပိုးချည်ထုတ်ပေးတဲ့အကောင်) လေးတွေဟာ တီကောင်မဟုတ်ပါဘူး။ ပေါက်ဖတ်အဖြစ် တော်တော်များများ သိကြတဲ့ လာဗာကောင်လေးပါ။ သူတို့ဟာ
ပိုးစာပင်လေးတွေကိုပဲ စားကြပါတယ်။ တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအချက်လေးတွေကတော့ Silkworm တွေကို အနည်းဆုံး နှစ် ၅၀၀၀ လောက်ကတိုင်း တွေ့ခဲ့တာပါ။
အခုတော့ သူတို့ကို သဘာဝအတိုင်း မတွေ့ရတော့ပါဘူး။
၉။ ကျွန်တော့်ကို နဂါးလို့ ခေါ်ပါ
horned toad (ဦးချိုပါတဲ့ ဖား)ဆိုတာ ဖားတစ်ကောင်မဟုတ်ပါဘူး။ မြောက်အမေရိက ကနေ လာတဲ့ တောက်တဲ့တစ်မျိုးပါ။ အမျိုးကွဲပေါင်း ၁၃ မျိုးရှိပါတယ်။
သူတို့အများစုကတော့ နဂါးပေါက်လေးတွေနဲ့ တူပါတယ်။
ငှက်ပျောပင်ဟာ အပင်တစ်မျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ပင်စည်မှာ သစ်သားလို တစ်ရှူးမျိုး မပါဝင်တာကြောင့် သစ်ဥသစ်ဖုတစ်မျိုးပါ။
၁၁။ အခုဆို မေမေ့ချစ်သားလေးက ဘယ်သူလဲ
ကိုအာလာဝက်ဝံဆိုတာ ဝက်ဝံမဟုတ်ပါဘူး။ သြစတေးလျနယ်က သားပိုက်ကောင်မျိုးပါ။ ကိုအာလာမိခင်တွေဟာ သူတို့ကလေးတွေအသက် ၆ လသားမတိုင်ခင်ထိ သူတို့ရဲ့
၁၂။ မြေပဲထောပတ်နဲ့ ဂျယ်လီဆန်းဒွစ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ တူလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး
မြေပဲ (peanut) ဆိုတာ အခွံမာသီးမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါဟာ ပဲစေ့တွေလိုမျိုး မြေအောက်ထဲမှာ ကြီးထွားတဲ့ ပဲတောင့်ရှည်မျိုးပါ
၁၃။ တယောကြိုး (catgut) ဆိုတာ ကြောင်နဲ့ဘာမှကို မဆိုင်တာပါ
ကြိုးလုပ်ဖို့သုံးတဲ့ catgut ဟာ ကြောင်ကနေရတာမဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်တော့ သိုးတို့ မြင်းတို့အူတွေကနေ ရတာပါ။ တယောတို့ ဂစ်တာတို့ စောင်းတို့အတွက် ဂီတလုပ်ငန်းတွေမှာ
၁၄။ ကျွန်တော့်နားတွေက ချစ်ဖို့ကောင်းနေတာ
jackrabbit ဆိုတာ အိမ်မွေးယုန်မဟုတ်ပါဘူး။ တောယုန်တစ်မျိုးပါ။ သူကအရွယ်ပိုကြီးပြီး နားရွက်အကြီးကြီးတွေရှိပါတယ်။
၁၅။ ဘာအလင်းရောင်မှ မလိုပါဘူး
ပိုးစုန်းကြူး (firefly) ဆိုတာ ယင်ကောင်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အမှောင်ထဲမှာ လင်းနိုင်တဲ့ ပိုးကောင်တစ်မျိုးပါ။ သူတို့ရဲ့ အဖော်ကိုရှာဖို့ ကူညီပေးနိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့
အလင်းရောင်ပုံစံတစ်ခုနဲ့ ပိုးစုန်းကြူးအမျိုးပေါင်း ၂၀၀၀ လောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကြှနျတျောတို့ အမှနျတရားကို ဖျောထုတျရလောကျအောငျ လှဲနတေဲ့ နာမညျမြား
အသီးပုံစံဖွဈနတေဲ့ အရှကျတဈမြိုး သားပိုကျကောငျပုံစံဖွဈနတေဲ့ ဝကျဝံ ခူကောငျပုံစံဖွဈနတေဲ့ တီကောငျ ခငျဗြား ဘာတှပွေောနတောလဲ။
နာမညျပေးမှားတယျဆိုတာအတှကျ misnomers ဆိုတဲ့ သီးသနျ့ term တဈခုရှိပါတယျ။ ဒါကတော့ ကြှနျတျောတို့ ဒီနရှေ့ာဖှကွေမယျ့ဟာပါ။
၁။ ဘယျကဘယျလို ကြှနျတျော Bald (ဂတုံး)ဖွဈရတာလဲ
bald eagle (သိမျးငှကျဂတုံး) ဟာ ဂတုံးမဟုတျပါဘူး။ သူ့ခေါငျးမှာ အမှေးဖွူတှရှေိပါတယျ။ မွောကျအမရေိက က တဈခုတညျးသော
သိမျးငှကျပါ။ သူ့ရဲ့တောငျပံအရှညျဟာ ရ ပအေထကျရှိပွီး သူ့ရဲ့အဓိက စားစရာကတော့ ငါးပါ။
၂။ ကြှနျတျောက ခငျဗြားအိမျနောကျဖေးကို တကယျကို မွနျမွနျတူးပေးနိုငျပါတယျ
ပရရေီခှေးဆိုတာ ခှေးမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ မွောကျအမရေိကမှာ တှရေ့တဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ ကိုကျဖွတျတတျတဲ့ သတ်တဝါတဈမြိုးပါပဲ။ သူတို့ဟာ
အလုပျကွိုးစားကွပွီး မိသားစုကို ဦးစားပေးတတျကွပါတယျ။ သူတို့ဟာ မွကေငျြးတှေ ဥမငျအနကျကွီးတှတေူးပွီး အုပျစုဖှဲ့နကွေပါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျးမွောကျမွားစှာက တူရကီတှဟော အရှအေ့ာဖရိက ကနေ ဥရောပကို ရှရေောငျငှကျတှေ တငျပို့ပါတယျ။ ဥရောပသားတှရေဲ့ စိတျထဲမှာ
အိမျစားကွကျတှဟော တူရကီကလာတာပါ။ ဒီတော့ တူရကီကွကျ သို့ အတိုအားဖွငျ့ Turkey(ကွကျဆငျ) ဆိုပီး ချေါကွပါတယျ။
ဥရောမရှာဖှစှေနျ့စားသူတှဟော မွောကျအမရေိကကို ရှာဖှတှေရှေိ့တဲ့အခါမှာတော့ သူတို့သိတဲ့ Turkey နဲ့ဆငျတူတဲ့ ငှကျတဈကောငျကို တှခေဲ့ပါတယျ။
ဒီတော့ အဲငှကျကို အဲနာမညျပေးလိုကျကွပါတယျ။ အဲဒါပါပဲဗြာ။
sweetbread(ပေါငျမုနျ့ခြို) ဆိုတာ ခြိုလဲမခြိုသလို ပေါငျမုနျ့နဲ့လညျး ဘာမှမဆိုငျပါဘူး။ အဲဒါဟာ စားစရာအတှကျအသုံးပွုတဲ့ တိရစ်ဆာနျတဈကောငျရဲ့
၅။ ဘယျဘာသာစကားနဲ့ဖွဈဖွဈ ရပေူခြိုးတာဟာ ပွီးပွညျ့စုံမှုတဈခုပါပဲ
တူရကီရခြေိုးခွငျးရဲ့ မူလအစဟာ တူရကီကမဟုတျပါဘူး။ ရောမကစတာပါ။ သူတို့ကို thermae လို့ချေါစဉျအခြိနျ Hellenic-Roman ခတျေမှာ
၆။ ဒါလာတာနတေယျဆိုတာ ဘယျသူမှ မမွငျပါဘူး
သခှားသီးဆိုတာ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမဟုတျပါဘူး။ သူဟာ အပငျရဲ့ပနျးပှငျ့အစိတျအပိုငျးကနေ လာတာပါ။ သူ့မှာ အစတှေ့ရှေိတဲ့အတှကျ ရုက်ခဗဒေနညျးအရ
Guinea pig (ရှဝေကျ) ဆိုတာ ရှကေနဖွေဈလာတာမဟုတျသလို ဝကျလညျး မဟုတျပါဘူး။ သူက ကိုကျဖွတျတတျတဲ့သတ်တဝါတဈကောငျပါ။ လလေ့ာမှုတှအေရ
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၃၀၀၀ လောကျက ရှဝေကျကို အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျအဖွဈ စတငျမှေးခဲ့တာပါ။
Silkworm (ပိုးခညျြထုတျပေးတဲ့အကောငျ) လေးတှဟော တီကောငျမဟုတျပါဘူး။ ပေါကျဖတျအဖွဈ တျောတျောမြားမြား သိကွတဲ့ လာဗာကောငျလေးပါ။ သူတို့ဟာ
ပိုးစာပငျလေးတှကေိုပဲ စားကွပါတယျ။ တခွားစိတျဝငျစားစရာအခကျြလေးတှကေတော့ Silkworm တှကေို အနညျးဆုံး နှဈ ၅၀၀၀ လောကျကတိုငျး တှခေဲ့တာပါ။
အခုတော့ သူတို့ကို သဘာဝအတိုငျး မတှရေ့တော့ပါဘူး။
၉။ ကြှနျတေျာ့ကို နဂါးလို့ ချေါပါ
horned toad (ဦးခြိုပါတဲ့ ဖား)ဆိုတာ ဖားတဈကောငျမဟုတျပါဘူး။ မွောကျအမရေိက ကနေ လာတဲ့ တောကျတဲ့တဈမြိုးပါ။ အမြိုးကှဲပေါငျး ၁၃ မြိုးရှိပါတယျ။
သူတို့အမြားစုကတော့ နဂါးပေါကျလေးတှနေဲ့ တူပါတယျ။
ငှကျပြောပငျဟာ အပငျတဈမြိုး မဟုတျပါဘူး။ ပငျစညျမှာ သဈသားလို တဈရှူးမြိုး မပါဝငျတာကွောငျ့ သဈဥသဈဖုတဈမြိုးပါ။
၁၁။ အခုဆို မမေခေ့ဈြသားလေးက ဘယျသူလဲ
ကိုအာလာဝကျဝံဆိုတာ ဝကျဝံမဟုတျပါဘူး။ သွစတေးလနြယျက သားပိုကျကောငျမြိုးပါ။ ကိုအာလာမိခငျတှဟော သူတို့ကလေးတှအေသကျ ၆ လသားမတိုငျခငျထိ သူတို့ရဲ့
၁၂။ မွပေဲထောပတျနဲ့ ဂယျြလီဆနျးဒှဈဆိုတာ ဘယျတော့မှ တူလာမှာ မဟုတျပါဘူး
မွပေဲ (peanut) ဆိုတာ အခှံမာသီးမဟုတျပါဘူး။ အဲဒါဟာ ပဲစတှေ့လေိုမြိုး မွအေောကျထဲမှာ ကွီးထှားတဲ့ ပဲတောငျ့ရှညျမြိုးပါ
၁၃။ တယောကွိုး (catgut) ဆိုတာ ကွောငျနဲ့ဘာမှကို မဆိုငျတာပါ
ကွိုးလုပျဖို့သုံးတဲ့ catgut ဟာ ကွောငျကနရေတာမဟုတျပါဘူး။ အမှနျတော့ သိုးတို့ မွငျးတို့အူတှကေနေ ရတာပါ။ တယောတို့ ဂဈတာတို့ စောငျးတို့အတှကျ ဂီတလုပျငနျးတှမှော
၁၄။ ကြှနျတေျာ့နားတှကေ ခဈြဖို့ကောငျးနတော
jackrabbit ဆိုတာ အိမျမှေးယုနျမဟုတျပါဘူး။ တောယုနျတဈမြိုးပါ။ သူကအရှယျပိုကွီးပွီး နားရှကျအကွီးကွီးတှရှေိပါတယျ။
၁၅။ ဘာအလငျးရောငျမှ မလိုပါဘူး
ပိုးစုနျးကွူး (firefly) ဆိုတာ ယငျကောငျလုံးဝမဟုတျပါဘူး။ အမှောငျထဲမှာ လငျးနိုငျတဲ့ ပိုးကောငျတဈမြိုးပါ။ သူတို့ရဲ့ အဖျောကိုရှာဖို့ ကူညီပေးနိုငျတဲ့ ထူးခွားတဲ့
အလငျးရောငျပုံစံတဈခုနဲ့ ပိုးစုနျးကွူးအမြိုးပေါငျး ၂၀၀၀ လောကျရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။
More From CantWait2Say
အသက် 23 နှစ်သာ ရှိသေးပေမယ့် ကမ္ဘာ့အသက်ငယ် အဖိုးဘွဲ့ကို ရခဲ့သူ သြစတေးလျသား
အသက် 23 နှစ်သာ ရှိသေးပေမယ့် ကမ္ဘာ့အသက်ငယ် အဖိုးဘွဲ့ကို ရခဲ့သူ သြစတေးလျသား Tommy Connolly ဆိုတဲ့ အသက် 23 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးဟာ လက်ရှိ သြစတေးလျမှာ နေထိုင်ပြီး Sunshine Coast ဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ အချိန်ပိုင်း အလုပ်တွေကိုလည်း လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ …
သင့်အတွက် လက်ထပ်ဖို့ မစဉ်းစားသင့်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ
သင့်အတွက် လက်ထပ်ဖို့ မစဉ်းစားသင့်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အိမ်ထောင်တခုတည်ဆောက်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ ဒီအချက်တွေကို အဓိကဦးစားပေး မစဉ်းစားမိရင် သာယာစိုပြေတဲံ အိမ်ထောင်ရေးတခုဖြစ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ရှောက်ကြဉ်အပ်တဲ့ လူစားမျိုးကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. အမြဲတမ်းနီးပါးစိတ်ဆိုး ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။သင်က အချစ်အကြောင်း အလွမ်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်ထဆိုးတတ်တာမျိုးလုပ်တတ်ပါတယ်။ဒါဟာ သူမအတွက် …
အမျိုးသမီးတွေရဲ့သဘောသဘာဝက နားလည်ရတော်တော်ကိုခက်ပါတယ်။အားလုံးနီးပါးပြည့်စုံနေတဲ့သူတောင် မိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် သူတို့နှလုံးသားကို ဘယ်လိုသိမ်းပိုက်ရမလဲဆိုတာ တွေးဆရခက်နေတတ်ပါတယ်။အမြဲလိုလို ယောင်္ကျားလေးတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် မိန်းကလေးတွေရဲ့ပုံစံကိုပဲ ဖော်ပြခဲ့တော့ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိန်းကလေးတွေရဲ့အာရုံကို ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့်ပုံစံကို တစ်ပြန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေထဲက တစ်ဝက်လောက် သင်ပိုင်ဆိုင်နေရင်ကို ခြေလှမ်းတိုးဖို့လမ်းစပါပဲ။ ။ 1.ယောင်္ကျားဆန်ခြင်း ယောင်္ကျားဆန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာခြင်း၊ရက်ရောပေးကမ်းခြင်း၊မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထား၊ရဲစွမ်းသတ္တိတို့နဲ့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုယောကျာင်္းဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ယောင်္ကျားလေးတွေကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံပြည့်စုံတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းမခါနိုင်ပါဘူး။ 2.ဟာသညဏ် …
CantWait2Say Copyright © 2018.
Can'twait2say (ပြောချင်လွန်းလို့) H2H Team မှ စီစဉ်တင်ဆက်သော www.cantwait2say.com တွင် ဖော်ပြပါရှိသော သတင်းများ၊ သတင်းဆောင်းပါးများ၊ ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးများကို မည်သည့် Facebook စာမျက်နှာ ၊ Website များ ၊ instant article များတွင်မဆို ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြခြင်းကို ခွင့်မပြုပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။ကူးယူခြင်းကိုတွေ့ရှိပါက ထိုကူးယူထားသော page များကို တရားဝင်ကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ပြီး တရားဥပဒေနဲ့ အညီ အရေးယူသွားမယ်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ Can'twait2say (ပွောခငျြလှနျးလို့) H2H Team မှ စီစဉျတငျဆကျသော www.cantwait2say.com တှငျ ဖျောပွပါရှိသော သတငျးမြား၊ သတငျးဆောငျးပါးမြား၊ ဘာသာပွနျဆောငျးပါးမြားကို မညျသညျ့ Facebook စာမကျြနှာ ၊ Website မြား ၊ instant article မြားတှငျမဆို ပွနျလညျကူးယူ ဖျောပွခွငျးကို ခှငျ့မပွုပါကွောငျး အသိပေး ကွညောအပျပါသညျ။ကူးယူခွငျးကိုတှရှေိ့ပါက ထိုကူးယူထားသော page မြားကို တရားဝငျကွငွောသှားမညျဖွဈပွီး တရားဥပဒနေဲ့ အညီ အရေးယူသှားမယျဖွဈကွောငျး အသိပေးအပျပါသညျ။